Martech Zone: Siyakwamukela Ekushicilelweni Kwami Okusha KweMartech! | Martech Zone
Sekuyiminyaka kuphela ngagcina ukwenza kabusha i-WordPress site yethu. Ngenkathi ngangikuthanda ukwakheka, nganginethoni yama-plugins nokwenza ngezifiso ukwenza ukuthi isebenze ngendlela ebengifuna ngayo, nami. Nge-WordPress, lokho kungaqala ukupela inhlekelele ngokubuka kokusebenza futhi bengibona imifantu esisekelweni.
Ngakho-ke, ngiqhubeke nokuzingela umklamo ongafaka zombili izibonisi ezinkulu kakhulu futhi uphendule kwizikrini zamaselula - konke ngenkathi ngikhuthaza abafundi bethu ukuba banamathele ukuthola ulwazi abebelufuna.
Ngasungula isiko WordPress ingane indaba ngaphezulu kwetimu eyisisekelo futhi esekelwa kahle ithengwe kusuka ku- I-Themeforest.
Njengoba kungenzeka uqaphele, ngaphinda ngabuya kwi-The Marketing Technology Blog ngaya ku- Martech Zone, Kusetshenziswa igama eliqondene nomkhakha othile kwezobuchwepheshe bokuthengisa nokumaketha… MarTech. Igama elithi blog belihambe ngendlela ngenkathi ngiqhubeka nokushicilela ucwaningo nezindatshana zigxile ekusizeni ochwepheshe ngokucwaninga, ukuthola, nokufunda ngobuchwepheshe bokuthengisa nobokumaketha.
Nginesizinda esilula engisithengile ezobuchwepheshe lokho phambili lapha (singahambisa konke siye kuleso sizinda kanye. izizinda zobuchwepheshe sezithandwa kakhulu).
Okwenziwa Okunye Martech Zone Unayo?
Resources - Manje senginolwazi oluphelele Izinsizakusebenza zeMartech isigaba, okubandakanya imicimbi, amaphepha amhlophe nezinye izinsiza.
Podcast - Ngiyaqhubeka nokuxoxisana nabaholi be-software, abasebenza, ababhali, nezipikha ezivela embonini yokuthengisa nokumaketha ku Martech Zone Izingxoxo.
Yini inhloso enkulu kaMartech?
Ngingaba kude neminyaka eyishumi, kepha ngihlala ngibheke ukubambisana nezinkampani zobulungu, abahlinzeki, imiphakathi, izinsiza zemfundo, kanye nezitifiketi… uma unokuthile okunezela enanini lokushicilelwa kwami, ngazise!
Tags: blogjenn lizaibhulogi lobuchwepheshe bokumakethamartechi-martech blogumphakathi we-martechisikhungo sokufunda se-martechisikhathiindaba ephathwayoisihloko se-wordpress